ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေခြင်းမျောက်ပုံစံ (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်သည်အပြောက်တွင်
အဘယ်ကြောင့် pair တစုံ-Bond tamarins နှင့်လူသား chimps ထံမှကွဲပြားခြားနားသောရှိပါသလဲ
မေတ္တာတော်၌တည်နေရန်ပျင်းရိ Way ကို လူသားများသည်အလိုအလျောက်သူတို့၏ချစ်ကြည်ရေးနှောင်ကြိုးကိုခိုင်မာစေရန်ထူးခြားသောစွမ်းရည်ရှိသည့်စုံတွဲတွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများဖြစ်သည်ဟုထောက်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသတိပြုမိသောအချက်များသို့မဟုတ်“ နှောင်ကြိုးအပြုအမူများ” ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ထိုသို့ပြုလုပ်ကြသည်။
ဤရွေ့ကားအပြုအမူများ (နည်းပညာပိုင်း, ပူးတွဲပါအချက်များ) အသားအရေမှအရေပြားအဆက်အသွယ်, ကာမဂုဏ်အနမ်း, နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာလေဖြတ်, ရောငျ့ရဲနှင့်အပျော်အပါး၏စကားမဲ့အသံများ, ပွေ့ဖက်သို့မဟုတ်အသံတိတ်ဇွန်း, မျက်စိအဆက်အသွယ်နှင့်အတူပြုံး, ရင်သား Caressing, လိင်တံကိုင်ခြင်း, ပျြောရငျးနှီးရင်းနှီးမှု, ဖြေလျော့ပေးခြင်း ဒါကြောင့်ထွက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက် cortex ၏ yaketyak-yak ကိုကျော်လွှား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခြေလက် ဦး နှောက်အတွက် beeline ဖြစ်သောကြောင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုသောသူတို့သည်ဆက်ဆံရေးကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရစေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစင်တာများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စီစစ်ခြင်းခံရသည်။ နေ့စဉ်နှောင်ကြိုးအပြုအမူများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည်။
(နမ်းခြင်း၊ ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်) ခဏတာသွားလေ့ရှိသည့်အရသာရှိသောနွေးထွေးသောအရည်ပျော်မှု (သင်အား mmmm, ahhh နှင့် ohhhh သို့သွားစေသည်) သည်ယခုပင်စောင့်ဆိုင်းနေပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မျှမလိုအပ်ပါ။ အားလုံးနိုးထရန်။ ကျွန်ုပ်၏ရင်သားများ၊ နားများနှင့်လက်ကောက်ဝတ်များသည် 'pause' ခလုတ်များနှင့်တူသည်။
တိရိစ္ဆာန်များအားလုံးကဲ့သို့ပင်လူသားများသည်အခြားသူနှင့်အတူအနားယူရန်လုံလောက်မှုမရှိ၊ အကယ်၍ လုံခြုံစိတ်ချရသောအချက်ပြမှုမလာလျှင်၊ သိမ်မွေ့သောကာကွယ်မှုသည်စိတ်ခံစားမှုအကွာအဝေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အတိတ်ကာလ၌များစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိခဲ့ရင်တောင်ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Bond အပြုအမူများသည် ဦး နှောက် (အဓိကအားဖြင့် amygdala) ၏ခုခံကာကွယ်မှုယန္တရားကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောသတင်းစကားကိုပို့ပေးသည်၊ သို့သော်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။
ဤချစ်ခင်တွယ်တာသောလုပ်ရပ်များသည်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပေါင်းသင်းလိုသောဆန္ဒကိုတိုးပွားစေသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည် oxytocin ("cuddle hormone") စီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Oxytocin စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ, ယုံကြည်မှုတိုးပွါးများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ counteracts ။ တိုတိုတှငျကြှနျုပျတို့ ကောင်းသောခံစားရတယ် ဤသူနှင့်ဆက်ဆံခြင်း၊ ၎င်းသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ၊ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကသိပ္ပံပညာရှင်များကကျူးလွန်သောဆက်ဆံရေးရှိသူများသည်ထုတ်လုပ်မှုရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် ဒီထက်စိတ်ဖိစီးမှု-related cortisol။ ထို့အပြင်လူသားမြားသ Mated အသက်ပိုရှည်နှင့်များ၏အနိမ့်မှုနှုန်းများ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ။ oxytocin (သို့မဟုတ် oxytocin ထုတ်လုပ်သည့်အပြုအမူများ) သည်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများပင်ကြီးထွားလာနေသည် စွဲဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး pair တစုံ bonders ၌တည်၏။ (အို pair တစုံ bonders ပိုပြီးဖြစ်နိုင်သည် စွဲမှကျရောက်နေတဲ့ ကြောင့် pair တစုံဘွန်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့်အလွန်ဦးနှောက် sensitivity ကိုအခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများ, ။ ) ကျွန်တော်တို့ကိုသည်ထက်တက် teaming ကောင်းသောဆေးပညာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မကြာမီကသုတေသန tamarin မျောက် ပွော့ oxytocin လွှတ်ပေးရန်နှင့်အသက်ရှင်လျှက်မျောက်-မေတ္တာတော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီအမျိုးအစားရိုးရှင်းတဲ့အပြုအမူ၏တနျခိုးအတည်ပြု။ Tamarins လူသားများကဲ့သို့အတူတူသူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်မြှင့်ကြောင်းလူမှုရေးအရ monogamous pair တစုံ bonders ဖြစ်ကြသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, chimps နှင့် bonobos pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းကြပါဘူး။ သူတို့က၎င်းအတွက်အာရုံကြောဆိုင်ရာစက်ယန္တရားကိုမတိုးတက်သေးပါဘူး chimps ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်သော်လည်း, သတိရပါ လူနေမှု မျိုးရိုးဗီဇဆွေမျိုးသားချင်းများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းခရီးအကြောင်းကိုခြောက်လသန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်တဲ့အနီးကပ်ဆုံးမျိုးရိုးဗီဇဆွေမျိုးသားချင်းများပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးခဲ့ကြသည် ကျွန်တော်တို့၏ သူတို့ပတ်ပတ်လည်မရှိတော့ရင်တောင်ဌာနခွဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနခွဲတစ်လျှောက်ရှိ ကျနော်တို့ pair တစုံ bonders သို့ပြောင်းလဲအဖြစ် tamarins, မျောက်လွှဲကျော်နှင့် titi မျောက်ရှိသည်။ လိင်အားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများအဘို့အကြိုး, သို့သော်တစ်စုံ bonders များအတွက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အဆက်အသွယ်လည်းအလွန်အကြိုးအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ (pair တစုံဘွန်း၏အာရုံကြောစက်ပြင်ပေါ်ထက်ပိုသည်, ဤဆောင်းပါး၏အဆုံးမှာ Larry ကလူငယ်၏သဘောထားမှတ်ချက်ကိုကြည့်ပါ။ )
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်း။ သိသာထင်ရှားသည့်အခြားတစ်ခုနှင့်အတူနေခြင်းအတွက်စွမ်းရည်အတွက်ကြိုးကြိုးတပ်ဆင်ထားသည့်မျောက်မျိုးစိတ်ငယ်လေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရွေးချယ်မှုကိုအသုံးချရန်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေမပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတူညီမှု” ဖြစ်ရန်အစီအစဉ်မထားပါ။ မျိုးစိတ်မရှိပါ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ များမှာ “ လူမှုရေးအရတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း” ဟူသည်မှာ ထတွဲနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွယ်တာမှုကင်းမဲ့ခြင်း၌တပ်မက်သောစိတ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကို bonobos မဖြစ်စေပါ။ သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ခြင်းကိုပိုမိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုပျော်ရွှင်မည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
ပူးတွဲမှုအပြုအမူများနှင့် oxytocin အကြား link ကိုသတိထား, တက္ကသိုလ် Wisconsin ပြည်နယ်၏သုတေသီ Chuck စနိုးဒန်မှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်အတူတကွခဲ့ကြောင်းမျောက်စွမ်း tamarin အတွက်နှစ်ဦးစလုံးတိုင်းတာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မိမိအရလဒ်များအားလုံးတို့တွင်အ oxytocin အဆင့်ဆင့်၏ကျယ်ပြန့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သို့သျောလညျး အတွင်း တစ်ဦးချင်းစီ pair တစုံ, အိမ်ထောင်ဖက်အလားတူအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့လုပ်နေတာခဲ့ကြသည်မည်သို့ပင်ရှင်းလင်းစွာနှစ်ဦးစလုံးအကြိုးခံစား။
အောက်ပါသော့ချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက် - အမြင့်ဆုံး oxytocin level နှင့်အတူတွဲဖက်မှုနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်အများဆုံးပါဝင်သည်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ခြင်း၊ လျှာကိုလှီးဖြတ်ခြင်းနှင့်ရနံ့မှတ်ခြင်း / စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ စိုက်ထူခြင်း၊ တောင်းခံခြင်း (လိင်အားဖြင့်ပရောပရည်ခြင်း)၊ လိင်အင်္ဂါများစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများလက်ခံသည့်တောင်တန်းများအားလုံး၊ သို့မဟုတ်ပါကတောင်သည်အမှန်တကယ်စုစည်းခြင်းသို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ Tamarins များအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိပါ!
အမျိုးသမီးများသည်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေသည်ကိုပင် Tamarins သည်နေ့စဉ်နီးပါးတောင်တက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုစိုက်ပျိုးခြင်းသည်ဓာတ်မြေသြဇာသက်သက်မျှသာမဟုတ်ပါ။ စနိုးဒန်ကမျောက်စုံတွဲတွဲဖက်မှုတွင်လက်မခံနိုင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု၏အခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ စာဖြင့်ရေးသားရာတွင်“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ဆောင်ခြင်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်သည်အရေးပါသည်။ (လူ့ရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဤသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်အယူအဆ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတည်ပြုသည့်မကြာသေးမီကစာအုပ်အတွက်ကြည့်ပါ။ ) အမျိုးသားများအတွက်များအတွက် Tantric လိင်.)
အဆိုပါသုတေသီများ oxytocin အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ကောင်းတစ်စုံနှောင်ကြိုးများ၏အရည်အသွေးရောင်ပြန်ဟပ်နှင့်ဖွယ်ရှိသူတို့လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အပြုအမူမှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ Said Snowdon"ဒီနေရာမှာငါတို့မှာအတူတူနေပြီးစည်းလုံးညီညွတ်တဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုဆက်ထိန်းထားဖို့၊ ကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့ oxytocin ဟာသူတို့ဆက်နွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာငါတို့လိုလူသားတွေမဟုတ်တဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိတယ်။
Snowdon အဖွဲ့ကအနီးကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လက်မခံနိုင်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်လူ့ဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးနှင့်ကြာချိန်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေဟာဒီနှစ်သိမ့်မှုပေးတဲ့အချက်ပြမှုတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုမကြာခဏသတိမထားမိကြဘူး။
ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ခွာသွားပြီးနောက်စုံတွဲများသည်ရံဖန်ရံခါလိင်ဆက်ဆံကြသော်လည်းချစ်ခင်တွယ်တာသော၊ လိင်မှုကိစ္စ (သို့သော်ရည်မှန်းချက်မဟုတ်သော) ဆက်သွယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်မှုမရှိသလောက်နည်း။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအော်ဂဇင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ oxytocin ကိုဖြစ်စေ၊ ရံဖန်ရံခါလိင်သည်ရေရေကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်တူသည်။ နေ့စဉ်နှောင်ကြိုးအပြုအမူများသည်သင်၏ပိုက်များအားအေးခဲနေစေသည့်တည်ငြိမ်သောရေစီးဆင်းမှုနှင့်တူသည်။ မှန်ပါသည်၊ ဇနီးမောင်နှံအချို့သည်ပြင်းထန်သောလိင်မှုနှိုးဆွပေးမှုနှင့်အတူမကြာခဏအော်ဂဇင်များသည်အကောင်းဆုံးကော်ဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆနှင့်သူတို့၏နှောင်ကြိုးကိုခိုင်မြဲစေရန်ကြိုးစားကြသည်။ သို့သျောလညျးဤကျဉ်းမြောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှုကသူတို့ကို pair-bonder အချစ်ဇာတ်လမ်း၏ပိုမိုလွယ်ကူသောတိတ်ဆိတ်သောစည်းချက်ကိုကျော်လွှားစေနိုင်သည်၊ သူတို့ရဲ့အပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုထုံ.
In မယား၏သွန်သင်ချက်အမှား ဒေးဗစ်ဘားရားစ်ကတွဲဖက်ထားသောနို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်လိင်သည်“ အထူးသဖြင့်ထက်သန်” သည်မဟုတ်ကြောင်းထောက်ပြသည်။ (အနည်းဆုံးကန ဦး စိတ်ပြင်းထန်မှုအပြီးမဟုတ်ပါ။ ) အိမ်ထောင်ဖက်များအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်အတူတကွအနားယူခြင်း၊
စိတ်ဝင်စားစရာအချက်မှာလူသားချစ်သူများတွင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသော၊ အင်အားစိုက်ထုတ်မှုမရှိသောအချက်ပြချက်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်окစီတိုစီနင်အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သမဂ္ဂများ၏အရည်အသွေးနှင့်ကျေနပ်အားရမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ခြေလက်အင်္ဂါဆိုင်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာယန္တရားကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးချဲ့ထားသော ဦး နှောက် cortex ကိုသာအသုံးပြုသည်။ ဒီတစ်ခါလည်း စုံတွဲများ၏ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို သူကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့သတိရှိရှိသတိမထားမိဘဲအစောပိုင်းသူတို့ရဲ့သမဂ္ဂများ၌ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကိုအပေါ်သို့ထိ မိ. လဲအရည်ရွှမ်းခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ထိန်းသိမ်းရန်။
အချစ်ဇာတ်လမ်းအတိတ်တွင်သင်သည်ပျက်ကွက်ခဲ့ဖူးပါသလား သငျသညျ rosy တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသင့်ရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အမြင်စောင့်ရှောက်ရန်အနှောင်အဖွဲ့အချက်ပြမှုများ၏အလုံအလောက်သင်၏အပေါင်းအဘော်ကို pair တစုံ-Bond နို့တိုက်သတ္တဝါပူဇော်ခဲ့ပါကသင်သည်အမှားများကိုလျစ်လျူရှု, သင်အကြားနွေးထွေးမှုပိုကောင်းလာစေဖို့ခွင့်ပြုပါ? မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင့် pair တစုံ-bonding မျောက်ဝမ်းကွဲကနေသင်ခန်းစာယူပါ။
[၏နာယကအနှစ်ချုပ် မှစ. Larry ကလူငယ်, Ph.D နေဖြင့်ဟောပြောပွဲ ခေါင်းစဉ် "လူမှုနှောင်ကြိုးနှင့် Monogamy ၏ Neurobiology ... "]
တူသောမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles, လူသားမြားသညျအလွန်လူမှုရေးဖြစ်ကြပြီး အိမ်ထောင်ဖက်အကြားကြာရှည် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဒါဟာအိမ်ထောင်ဖက်အကြားရှည်လျားတည်တံ့လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းပေါ်လာပါဘူးသမျှသောနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်များ၏ 95 ရာခိုင်နှုန်းဆနျ့ကငျြဘ၌တည်ရှိ၏။ pair တစုံဘွန်းအခြေခံဦးနှောက်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇယန္တရားများဆန်းစစ်လေ့လာရေးလူမှုရေးဆက်ဆံရေးထူထောင်အတွက်ဦးနှောက်ထဲမှာအနည်းငယ်သော့ချက်ဓာတုပစ္စည်းများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထင်ရှားပါပြီ။ oxytocin နှင့် vasopressin ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လူမှုရေးအချက်ပြမှုများဖို့ဦးနှောက်ရဲ့အာရုံစိုကျဖို့ပေါ်လာပါသည်။ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်းအဲဒီဓာတုပစ္စည်းဟာမိတ်ဖက်များနှင့်မိတ်လိုက်၏အကြိုးသဘာဝတရား၏လူမှုရေးတွေကိုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ထူထောင်ဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်သည့်စနစ် (ဥပမာ dopamine) နဲ့အပြန်အလှန်။ အခြားသူတွေမဟုတ်စဉ်ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်လူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းအချို့သောမျိုးစိတ်ရှိပါသလဲ monogamous နှင့် Non-monogamous မျိုးစိတ်များ၏ဦးနှောက်နှိုင်းယှဉ်သုတေသနကတစ်ဦးချင်း Bond နိုင်စွမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ကြောင်း oxytocin နှင့် vasopressin တုံ့ပြန်သော receptors ၏တည်နေရာကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, monogamous အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လည်းစွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းတစ် ventral forebrain ဆုလာဘ်စင်တာအတွက် receptors vasopressin မြင့်မားပြင်းအားရှိသည်။ non-monogamous မြက်ခင်း voles အဲဒီမှာ receptors ကင်းမဲ့နေသည်။ receptors non-monogamous မြက်ခင်း vole ၌ဤဆုလာဘ်စင်တာသို့ထည့်သွင်းလျှင်သို့သော်ဤယောက်ျားသည်အမှတ်တမဲ့ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ ဒီလေ့လာမှုတွေလည်းစွဲကဲ့သို့တူညီသောဦးနှောက်ယန္တရားများစွာကိုကြောင်း pair တစုံဘွန်းရှယ်ယာအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မျိုးဗီဇလေ့လာမှု vasopressin အဲဒီ receptor အချို့ဦးနှောက်ဒေသများတွင်အဲဒီ receptor စကားရပ်များ၏အဆင့်အတန်းကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်အထီးအမျိုးသမီးနှင့်အတူလူမှုရေးနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းကုဒ်သွင်းသည့်ဗီဇ၌ DNA ကို sequence ကိုအပြောင်းအလဲထင်ရှားပါပြီ။
မကြာသေးမီကလူသားများပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုများအရ Vole နှင့်လူသားတို့တွင်လူမှုရေးသိမှတ်မှုနှင့်အပြုအမူများကိုထိန်းညှိရာတွင် oxytocin နှင့် vasopressin တို့၏အခန်းကဏ္ in များ၌ထူးခြားသောတူညီမှုတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လူ့ vasopressin အဲဒီ receptor မျိုးရိုးဗီဇရဲ့ DNA ဆက်နွှယ်မှုသည်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏ကွာခြားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လူသားများတွင် Oxytocin ကို intranasal ပေးပို့ခြင်းသည်ယုံကြည်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ မျက်စိကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ စာနာစိတ်တိုးပွားခြင်းနှင့်လူမှုရေးအရအားဖြည့်သင်ကြားခြင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အမှန်စင်စစ်လူသားများသည် oxytocin စနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူမှုရေးအချက်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်စေသည်။
မိခင်ရဲ့နို့လူသိများဟော်မုန်းကိုလည်းမိဘများအကြားနှောင်ကြိုး (2015) လှုံ့